MAC ကို PC မှာသုံးချင်လို့ - MYSTERY ZILLION
MAC ကို PC မှာသုံးချင်လို့
MAC ကို PC မှာသုံးချင်လို့ပါ ။။ ကျွန်တော်က intel corei7 RAM 8GB ပါ ။
အဲဒါ ဆိုင်ကနေ .. iPC 0Sx86 10.5.6 (PPF2) , iATKOS , iPortable Snow သုံးခုလုံး၀ယ်လာပြီး
စမ်းပြီးပါပြီ ။။ လုံး၀ မရပါဘူး ။ ...
အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး ။
တစ်ခုကတော့ Hardware တွေကို စစ်ပါတယ် .. တီ ... ဆိုအကြာကြီးမြည်ပြီးတော့ ..
ပြီးလည်းပြီးတော့ သူ့ ပန်းသီးဟာ မဟုတ်တော့ Boot တောင်ပေးမတက်တော့ဘူး ။
အခွေတိုင်းလည်း Boot ကိုမတက်နိုင်တာပါ ။။
ကူညီပေးကြပါ ခင်ဗျာ ။
Check the following link :-) I think it work !
ဒါနဲ့ ... သူက Core2 Duo ပဲ ရတာလားမသိဘူးနော် ။။။
ကျွန်တော် သေချာစမ်းလိုက်ဦးမယ် ။။။ ကျေးဇူးပါပဲ ။
Check this website http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/Installation_Guides
iPC 0Sx86 10.5.6 (PPF2) , iATKOS , iPortable Snow ကိုဘယ်ဆိုင်က၀ယ်လို႔ရလဲ.....?
core2duo မှာပဲတင်သုံးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး core2duo ကအနိမ့်ဆုံးပါ၊သူနဲ့အထက်မှာတင်သုံးလို့ရပါတယ်၊လေ့လာချင်ရင်တော့ဒီမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်၊http://iatkos.me/ ကျွန်တော်ကတော့ i5 motherboard က intel
နဲ့ graphic က amd hd radeon R-6670 နဲ့ ram4gbs မှာတင်တာရပါတယ်၊သူ့ကိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး motherboard bios setting ကို change ရပါတယ်၊အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့ processor က intel processor
ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ အကူအညီလိုရင်တော့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော့ gmail ကိုအက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်၊ [email protected]
Niresh's 10.8.2 ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ အဆင်ပြေမှာပါ အရင် version တွေက laptop bios ကို မသိတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်စမ်းသလောက် laptop တော်တော်များများရတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော် တော့ Torrent ကဒေါင်းတာပါ။ Google မှာရှာကြည့်ပါ သူလင့်ကိုကော ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာပါ ဖြေထားပါတယ်
အရင် version တုန်းက laptop ဆို keyboard ကိုမသိတာများတယ် အဲဒါ Username ဖြည့်ခါနီးကျ USB Keyboard လေးတက်ရတယ်။ပြီးရင်တော့သုံးရပါပြီး OS ပေါ်ရောက်ရင် နောက် orginal os ကို windows သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာတင်တဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်
အထက်ကလင့်မှာ တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာ လက်ရှိ windows7(Core i5) laptop မှာ Mountain lion ကို တင်ပြီး သုံးနေပါတယ်။